Horta ao anatiny: fampirantiana sy hetsika lehibe any Bruxelles amin'ny taona 2018
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Belzika » Horta ao anatiny: fampirantiana sy hetsika lehibe any Bruxelles amin'ny taona 2018
Ao anatin'ny "Horta inside out", taona natokana ho an'ity haitao maritrano ity, hisy hetsika maro isan-karazany hanomezam-boninahitra ny tompon'ny Art Nouveau. Anisan'ireo hetsika, ny fampirantiana sy ny hetsika tany am-boalohany dia hipetraka manodidina an'i Bruxelles amin'ny herinandro ho avy.
Iray amin'ireo mpanao maritrano lehibe indrindra tamin'ny taranany, Victor Horta dia namela ny marika tany Bruxelles. Avy amin'ny Horta House mankany Hôtel Tassel, tsy lazaina intsony ny Hôtel Solvay, tsy azo atao ny tsy mankafy ireo vatosoa maritrano.
Manankarena amin'ity lova ara-javakanto ity, i Bruxelles dia nananany an'i Horta hanomezam-boninahitra ny fahalalany nandritra ny taona iray. Andrimpolo momba ny kolontsaina Bruxelles eo ho eo no niditra an-tsehatra mba hahafahanao mahita na mahita indray an'i Victor Horta isaky ny zoro.
Mandritra ny taona dia manolotra andiana hetsika miodina manodidina ny mpanao mari-trano izy ireo: fampirantiana, fitsangatsanganana an-tsehatra, hetsika fanabeazana, fialamboly. Fomba tsara hanamarihana ny asan'ity mpanao maritrano miavaka ity.
Ity misy topimaso amin'ny fampirantiana sy hetsika hatokana ho azy mandritra ny herinandro ho avy.
"The Temple of Human Passion - ilay trano voalohany namboarin'i Victor Horta tany Bruxelles" Tamin'ny 1890, dia nanankinana andraikitra tamin'ny famolavolana trano i Victor Horta mba hametrahana ny "Human Passion" fanampiana marbra lehibe nataon'ny mpanao sary sokitra Jef Lambeaux. Nanana olana tamin'ny famonoana ny fanirian'ny mpanao sary sokitra teo amin'ny maritrano ny tranobe. Saingy nahavariana ny valiny: na dia kilasika aza tamin'ny fahitana azy voalohany dia nivadika ho zava-baovao tokoa ilay trano ary nanambara mazava ny fisian'ny Art Nouveau.
Museum an'i Cinquantenaire 24 martsa ka hatramin'ny 28 oktobra 2018
"Mazava amin'ny asan'i Victor Horta: avy any Hôtel Tassel ka hatrany amin'ny Central Station"
Nandritra ny asany dia nikendry ny haka jiro tao amin'ireo tranony i Horta — hazavana izay tsy dia nisy loatra tao anatin'ireo bourgeois interiors nentin-drazana. Eto, ireo mpitsidika dia ho afaka hankasitraka ireo karazana vahaolana hafahafa eritreritr'i Horta hamela ny hazavana hiditra ao amin'ny faritry ny tranony. Trano efatra ambin'ny folo, avy ao amin'ny Hôtel Tassel ka hatrany amin'ny Central Station, no nofidina hanehoana ny olan'ny jiro iray nalamina tamin'ny fomba voalohany nataon'i Horta.
Museum an'i Horta (miaraka amin'ny CIVA)
27 martsa hatramin'ny 24 jona 2018
“Antony antony manosika. Lamba sy temotra any an-tranon'i Bruxelles ”
Art Nouveau dia vanim-potoana tena lehibe tamin'ny famoronana sary an-tsary sy lamba. Ao anatin'ny tranobe Art Nouveau, samy i Victor Horta sy ireo niara-belona taminy dia nanome ny hevitry ny zava-kanton'ny kanto tanteraka ary nanangana ny zava-kanto nampiharina, nanala ny ambaratongam-pahefana isan-karazany amin'ny kanto plastika. Motifs tany am-boalohany, asa tanana sarotra… ny fampirantiana dia mamerina ity lova marefo ity amin'ny toerana sahaza azy amin'ny tantaran'ny endrika.
Ny trano Autrique 18 aprily hatramin'ny 27 janoary 2019
Ivon-toerana momba ny kanto tsara nataon'i Victor Horta. Asa eo an-dàlana
Amin'ny faha-90 taonan'ny Centre for Fine Arts, BOZAR dia mikarakara fampirantiana tokana momba ilay trano. Ivon-toerana momba ny kanto tsara nataon'i Victor Horta. Ny Asa iray eo an-dàlana dia mampivondrona modely maritrano, antontan-taratasy tsy mbola nisy toa azy avy amin'ny Blaton Papers, drafitra fanovana ho avy, ary fametrahana sy fanelanelanana amin'ny maritrano.
Ivon-toerana ho an'ny hai-kanto - BOZAR 27 aprily hatramin'ny 26 aogositra 2018
“Horta tsy voaorina”
Isaky ny fahavaratra dia mikarakara fampirantiana miaraka amin'ny lohahevitra "Bruxelles Unbuilt" ny CIVA izay mampiseho antontan-taratasy avy amin'ny arisivany mifandraika amin'ireo tetik'asa maritrano sy an-drenivohitra izay tsy nisy vokany velively. Tamin'ity taona ity, natokana ho an'i Victor Horta ny fampirantiana, mifantoka indrindra amin'ny tetikasany lehibe hanarenana ny sakana eo amin'ny Palace of Fine Arts sy ny Central Station, ary ny Pavilion Kongo natao ho an'ny Paris Exposition Universelle of 1900.
1 Jona ka hatramin'ny 15 Oktobra 2018
Fampirantiana mandritra ny taona
“Fivarotana Horta sy Waucquez”
Sangan'asa Art Nouveau noforonin'i Victor Horta, ilay Waucquez Stores taloha, izay trano fonenan'ny Belgian Comic Strip Center, no notokanana tamin'ny 31 martsa 1906. Ity fampirantiana ity dia manome ny mpitsidika ny fahafaha-mahita, amin'ny alàlan'ny sary sy antontan-taratasy miavaka, fampisehoana an-tsary mampiavaka an'i Bruxelles tamin'ny taonjato faha-20: ny fahaterahana sy ny fiainan'ireo fivarotana lamba Waucquez ary koa ny fanovana ilay tranobe ho tranombakoka tantara an-tsary. Ho hitanao ihany koa ny ampahan'ny sary ataon'ny mpanao sary an-tsary mampihomehy avy amin'ny tantaran'ny fivarotana Waucquez taloha.
Ivontoerana Komikà Belzika 1 Janoary ka hatramin'ny 31 Desambra 2018
“Trano studio an'i Victor Horta”
Ny tranom-bakoka Horta dia miorina ao amin'ny trano sy studio an'ny mpanao mari-trano Victor Horta, UNESCO World Heritage Site. Naorina teo anelanelan'ny 1898 sy 1901 tamin'ny isa 23 sy 25, Rue Américaine ao Saint-Gilles, ireo trano roa ireo dia mahazatra ny vanim-potoana Art Nouveau eo amin'ny tampony. Ny firavaka anatiny dia voatahiry betsaka, miaraka amin'ny mozaika, fitaratra misy loko ary rindrina mandrafitra iray mirindra sy kanto, hatramin'ny antsipiriany farany.
Museum an'i Horta
1 Janoary hatramin'ny 31 Desambra 2018
"The Autrique House: Atitany trano misy tanàna naorin'i Victor Horta"
Tamin'ny 1893, Victor Horta dia notendrena hanangana trano ho an'ny sakaizany Eugène Autrique, injeniera mekanika. Ity dia iray amin'ireo trano tanàna voalohany namboarin'ny mpanao mari-trano, ary efa nanambara ny sasany amin'ireo singa manamarika azy indrindra: ny fiandohan'ny fifandraisana amin'ny lampivato, ny rindrin'ny rindrina misy hateviny isan-karazany, ny simetera miaraka amin'ny asymmetria, tsy lazaina intsony ny fampiasana vy ary fitaovana indostrialy hafa.
Ny trano Autrique
"Tany amin'ny toerana nahaterahan'i Art Nouveau"
Ity fampirantiana ity, karakarain'ny Directorate of Monuments and Sites ao amin'ny Faritra Brussels Capital, dia manome fampahafantarana ankapobeny ny asan'ny mpanao maritrano Victor Horta miaraka amin'ny fampisehoana ireo sanganasa lehibe naoriny tany Bruxelles. Ny fanolorana dia manasa ireo mpitsidika hahita ny zava-miafina ao ambadiky ny asa famoronana ataon'ny iray amin'ireo mpanakanto kanton'ny Art Nouveau, hetsika iray izay nanetsika ny eritreritra momba ny habaka sy ny maritrano eropeana tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-20. Sary maromaro, antontan-taratasy ary drafitra manasongadina ny lanjan'ity lova hafakely ity.
15 Janoary hatramin'ny 31 Desambra 2018
"Horta & Wolfers"
Tamin'ny 1912, ny mpamaky firavaka sy mpanefy volamena Wolfers Frères dia nisokatra teny amin'ny Rue d'Arenberg ao anatin'ny trano lehibe noforonin'i Victor Horta. Tamin'ny 1973, rava ilay fivarotana ary namboarina ho anisan'ny Royal Museums of Art and History. Ary farany tamin'ny taona 2017, 105 taona taorian'ny nanokafana azy, dia tsy vitan'ny hoe tafaverina amin'ny laoniny tanteraka ny ao anatiny, fa niverina tamin'ny endriny tany am-boalohany araka ny namolavolan'i Horta azy. Ny varavarankely tany am-boalohany dia mampiseho ny sangan'asan'ny Art Nouveau sy Art Déco.
Museum an'ny Cinquantenaire
1 Janoary ka hatramin'ny 31 Desambra 2018 (misokatra ny 28 Novambra 2017)
"Brussels Art Nouveau & Art Deco Festival 2018"
Fetibe natokana ho an'i Art Nouveau sy Art Déco. Ny lohahevitra tamin'ity taona ity dia: “ireo harena miafina sy ifantohan'ny Victor Horta”. Ny programa dia ahitana hetsika maro samihafa hahitana ny zava-mahatalanjona amin'ireo fomba arsitektory roa ireo: fitsidihana ny atitany Art Nouveau sy Art Déco manokana, fitsangatsanganana an-tongotra an-tongotra, ataon'ny mpanazatra sy bisikileta, kaonseritra, fampirantiana, hetsika ara-kolotsaina ary maro hafa.
Brussels asbl 10 ka hatramin'ny 25 martsa 2018
“Andro eran-tany Nouveau Art - fifaninanana sary”
Andro fankalazana ny World Art Nouveau 2018 dia hankalazana, ankoatry ny zavatra hafa, ny faha-150 taonan'ny nahaterahan'i Charles Rennie Mackintosh, Peter Behrens, Komor Marcell ary Lluis Muncunill i Parellada, ary koa ny faha-10 taonan'ny fahafatesan'i Gustav Klimt, Egon Schiele, Otto Wagner sy Koloman Moser. Mba hankalazana izany, fifaninanana sary mitondra ny lohateny hoe "Art Nouveau Architect ankafiziko" dia karakarain'ny Réseau Art Nouveau Network amin'ny alàlan'ny pejiny Facebook, ahafahan'ny besinimaro mampiseho ny mpanao maritrano tiany indrindra amin'ny alàlan'ny haino aman-jery iray amin'ny sangan'asany.
Tambajotra Réseau Art Nouveau
“Fetiben'ny Artonov: Victor Horta sy Freemasonry”
Ny tanjon'ny Fetiben'ny ARTONOV dia ny hampisy fifandraisana eo amin'ny zavakanto fampisehoana, toy ny mozika, dihy, lamaody ary teatra, ary ny kanto hita maso, ka mamporisika ny fomba fiasa eo amin'ny samy mpampianatra.
Ny artista dia hisaintsaina ny fomba fifandraisan'ny kanto sy ny fampisehoana amin'ny habaka maritrano. Ho an'ny fanontana andiany fahefan'ny Festival ARTONOV, ny programa dia hitodika amin'ny lohahevitra "Victor Horta sy Freemasonry" amin'ny toerana toy ny Horta-Lambeaux Temple of Human Passions, ny Wolfers Store ao amin'ny tranombakoka Cinquantenaire, ny Autrique House ary ny Horta Museum . Ny tandindona sy ny fombafomban'ny freemasonry dia loharano aingam-panahy sy fiofanana ho an'i Victor Horta nandritra ny asany.
12 hatramin'ny 14 Oktobra 2018
Victor Horta sy Fetiben'ny boky Art Nouveau
Fampirantiana boky natokana ho an'i Victor Horta sy Art Nouveau. Ahitana hetsika toy ny lahateny, fampisehoana boky, fotoam-panasoniavana boky, fitsangatsanganana an-tsehatra ny fampirantiana “At the Birthplace of Art Nouveau”, ary fitsangatsangana manodidina ny faritra mba hahitana ny tranon'ny Victor Horta.
11 hatramin'ny 13 Oktobra 2018